बढ्यो सुनको भाउ, तोलाको कति ? - सिम्रिक खबर
बढ्यो सुनको भाउ, तोलाको कति ?
• ५ दिन अगाडि
काठमाडौँ । सातामा कारोबारको पहिलो दिन आइतवार नेपाली बजारमा आइतबार सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार तोलामा ९४ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन आइतबार सामान्य बढेर ९४ हजार ९०० रुपैयाँ पुगेको हो ।
यस्तै तेजावी सुन तोलामा ९४ हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यसैबीच आइतबार चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ । शु्क्रबार तोलामा १२ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य आइतबार पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको हो।